NGICELA NINGAHAMBI: Amaqhinga Amathathu Okuphuma Angabacasuli Abavakashi Bakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMeyi 2, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UTom Waterfall
Phuma kubuchwepheshe bezinhloso (Kwenzenjani?). Uhlobo lwentengiso yedijithali lwe-KC ne-The Sunshine Band's Ngicela Ungahambi.
Sifakazele kaninginingi ngokuhlolwa kwe-A / B ukuthi ukusebenzisa ubuchwepheshe bezinhloso zokuphuma ukuqala imbondela kungaba yindlela ephumelela ngokwedlulele yokuhlehlisa izivakashi. Izibonelo zokuqukethwe okubangelwe kufaka phakathi ukuphakanyiswa kwamakhodi esaphulelo noma ukwaziswa kokubhaliswa kwencwadi yezindaba. Abanye bangaphikisana nokuthi lokhu kuphazamiseka kunciphisa isipiliyoni samakhasimende. Ukugcina lokhu engqondweni, ngezansi kunamaqhinga ambalwa angakusiza ukumelana nalomphumela lapho wenza imikhankaso yenhloso yokuphuma.
Icebo # 1 - Ingxenye, Ingxenye, Ingxenye
Kunezinzuzo eziningi ukugxila ekuphumeni kwakho kwemiyalezo kuma-subsets athile wesisekelo sezivakashi zakho. Ngeke ufune ukukhipha amakhodi esaphulelo ngokuthanda kwakho kuzo zonke izivakashi ezikhona. Isiphakamiso samakhodi ezaphulelo singalimaza umkhiqizo wakho futhi sishayele abathengi abangathembekile. Isu elinamandla kakhulu ukuklomelisa amakhasimende akho aphezulu - isisekelo sesivakashi sakho esithembeke kakhulu - ngezaphulelo zokugcina lelo zinga elibaluleke kakhulu lokugcinwa kwamakhasimende emakethe egcwele futhi encintisana kakhulu.
Ngomunye wamakhasimende ethu endiza, sisanda kufaka inhlanganisela yedatha yamakhasimende engaxhunyiwe ku-inthanethi, idatha yesikhathi sangempela kanye nokuziphatha kokuphequlula / kokuthenga ukuze kubhekiswe kuphela izingxenye zenani eliphezulu, ezinokwethembeka okuphezulu ngezaphulelo. Lokhu kuholele enhlosweni yokuphuma egxile kakhulu ekhiqizeni ukukhuphuka ekubhukheni amaphesenti ayi-16 kuye kwangama-20 ezigabeni ezintathu ezingazodwana.
Ngasohlangothini lokutholwa kwezinto, uzofuna ukwazisa ukubhaliswa kwencwadi yezindaba uma ubona ukuthi isivakashi sisha.
Iqiniso ukuthi kubalulekile ukuthi ugxile emkhankasweni wakho bese ucabanga ngombono wokwehlukaniswa okunengqondo futhi osebenza ngokuzungeza inhloso yephrojekthi yakho (i-pun ehlosiwe).
Icebo # 2 - Yiba Njengamanzi
Icebo lakho akudingeki ukuthi libe imbondela. Cabanga ngaphandle kwebhokisi (i-pun iphinde ihlose). Nweba ama-horizons akho (njengoba kusikisela uBruce Lee) bese ucabanga ukwethulwa kokuqukethwe kwakho ngendlela ehlukile engahle ithikameze futhi ithuthukise ulwazi lwamakhasimende, ngenkathi uheha isivakashi sibuyele ekhasini.
Zama ukuqala i- sawubona ibha (njengomyalezo ongenhla kwesikrini, umsebenzisi angawususa) esikhundleni sombondela we-brash ojwayelekile ongaphazamisa ukuphequlula ekhasini. Noma gxila kokunye okuqukethwe okuthakazelwayo, njengeqiniso lokuthi into ingaba isitoko esiphansi noma ukutholakala okuphansi bese wethula umkhondo omncane:
Ukwakha umkhombandlela onjengalona, ​​udinga ukuhlukaniswa ukuze ubone ukuthi kunezindiza ezihleli izihlalo ezinhlanu noma ezimbalwa. Ngezindlela eziningi, konke kuhlala kubuyela ku-Tactic # 1 (njengoba uzobona futhi kutiphu yokugcina ngezansi).
Icebo # 3 - Siza
Awudingi ukufaka isaphulelo esikhulu noma bhalisa lapha umyalezo phambi kwesihambeli. Ungavele unikeze usizo olufike ngesikhathi esivakashini esidinga usizo.
Phakathi ku isisekelo sigijimise ikhasimende elithengisa umshwalense wasekhaya, siqoqe izimfanelo eziningi zezivakashi ngokusebenzisa okokufaka kwabo okuhlukahlukene njengoba behamba nge-faneli - isihloko (ukuthola ubulili), usuku lokuzalwa (ukudala ukuqoqwa kobudala beminyaka) nokuningi (bheka iTactic # 1 aphinde). Ekugcineni, ukuhlanganisa lobu bungako ngamanani wokuguqulwa kwesinyathelo ngesinyathelo nokuzibandakanya ekhasini ngalinye lofanele wohlelo lokusebenza kusivumele ukuthi siqonde amaphuzu amaningi wokungqubuzana ngokususelwa esivakashini. Okunye abakufundayo ukuthi izivakashi ezikubakaki wobudala obuphakeme kakhulu ziguqulwa ngezinga eliphansi kakhulu uma sezifinyelele esigabeni esithile sefanele. Liyini ikhambi? Ukukhomba lezi zivakashi ngokunikezwa ngosizo lwengxoxo uma ngabe bezilinde isikhathi esithile futhi zikhombise inhloso yokuphuma. Imiphumela ikhombise ukusebenzisana okuthuthukile nesipiliyoni samakhasimende, kanye nezicelo ezisindiswe yithimba lesikhungo sezingcingo zamakhasimende.
Ngiyacela Ungahambi (Ungahambi)
Ukusebenzisa la maqhinga kuzindlela zakho zokuphuma akukwazi kuphela ukuqhuba ukwanda kokusebenza komkhankaso wakho, kepha kuqinisekisa ukuthi awusunduzeli izivakashi kude ngenxa yezindlela ezihlasimulisayo kwesinye isikhathi ezethulwayo ezinqwabelanayo zezinhloso. Ekugcineni, lokhu okuhlangenwe nakho kwamakhasimende kusadingeka ukuthi kuhlolwe, futhi kuhlolwe ngokuqhubekayo kulokho, ukuze uqiniseke ukuthi basebenzela izivakashi zakho. Kepha iphuzu ukuthi ungakhanga ngesizotha isivakashi sibuyele kusayithi lakho esikhundleni se- ngicela, ngicela, ngicela ungahambi.
Ngicela ungahambi. Bheka ukufundwa kwethu okusheshayo, Izindlela Zokulwa Nenhloso Yokuphuma.
Tags: phuma divInhloso yokuphumaamasu enhloso yokuphumaphuma okuzivelelayophuma ekubhaliseniimvu
UTom Waterfall unguMqondisi Wezisombululo Zokusebenzisa i-EMEA ne-APAC ku Webtrends. Unesibopho sokuletha amasu okwenziwa kwamakhasimende angama-360-degree, ukukhulisa ukuguqulwa kwesayithi labo nokumaketha i-ROI. Njengesazi se-omni-channel nokwenza ngezifiso, uTom unentshisekelo yokuqonda ukuthi abathengi benza kanjani futhi basabela kanjani kokuqukethwe okuhlukile lapho beku-inthanethi.
Izinto ezi-5 eziphezulu ezibulala ukwethembeka kwamakhasimende